Xukuummadda ra’iisal wasaare Lövfen oo laga yaabo in maanta la kala diro | Somaliska
Xukuummadda ra’iisal wasaare Lövfen oo laga yaabo in maanta la kala diro
Tan iyo markii ay soo baxeen fadeexadda la xirriirta waaxda gaadiidka ee sida ka fiirsasho la’aanta leh gacatan ugu gelisay maareeynta xogta iyo siraha dalka shaqaale ajaanib ah, waxaa isa soo taraya qeeylo dhaanta ka soo yeereysha dhamaan asxaabta siyaasadeed ee dalka ha ahaato asxaabta gacan saarka la leh iyo kuwa mucaaradka.
Xalka haatan muuqda ayaa ah in la kala diro dowladda ra’iisal wasaare Stefen Lövfen, sidaana waxaa telefeyshinka dalka Iswiidhan u sheegay ilo wargaleeyo, ra’iilsa wasaaraha ayaa maanta iskugu yeeray kulan saxaafadeed, waxaase jira warar sheegaya in ra’iisal wasaaraha laftiisa ka dego xilka, halka qaar kalena ay leeyihiin waxaa uu diidan yahay in xukunka ka dego.
“Waxaa dhici karta in uu Lövfen laftiisa ka dego xukunka” ayey ilo wargaleedyadan ku yiraahdeen telefeyshinka SVT ee wararka. Telefeeyshinka ayaa sheegay in xukuumadda eeysan tirada ku darsan in sharuudo adag ay mucaaradka kala hor imaan doonaan sadex wasiir oo ka tirsan xukuumadda ee aadka loo dhaliilsan yahay.
Wasiiradda kalsoonida lagala laabtay: Wasiiradda agaasinka xogta dalka & Is-gaarsiinta Anna Johansson, wasiirka gaashaandhigga Peter Hultqvist iyo wasiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman.
Dhinaca kale asxaabta mucaaradka ayaa kalsoonidii kala laabtay sadex wasiir oo garabyada ra’iisal wasaaraha ka mid ah kuwaas oo dusha laga saaray fadeexada waaxda gaadiidka dhex dabaalatay ee maareeynta xogta iyo siraha dalka. Waxaase suuragal ah in ra’iisal wasaare Lövfen ku dhawaaqo doorasho dhacda markale. Saas oo ay tahayna mucaadka laftooda ayaa kala daadsan oo aan u awood badneyn siddii sanadihii hore haddii maanta doorasho lugu dhawaaqo.
Maxaa yeelay xisbiga dhexe iyo xisbiga Leeybaraal-ka waxaa ay diidan yihiin in ay wada shaqeeyn la yeeshaan xisbiga xah jirka ah ee SD. Wasiiradda ay mucaaradka kalsoonida kala laabteen ayaa kala ah Wasiiradda agaasinka xogta dalka iyo is gaarsiinta Anna Johansson, wasiirka gaashaandhifa Peter Hultqvist iyo wasiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman. Waxaase la dhowraya in saacadaha soo socda iyo isbadalka siyaasadeed ee dalku galo iyadoo haatan ay wasiiradda ku sii qul qulayaan aqalka laga arimiyo dalka Rosenbad.
Moderat-ka oo ka guuxay hadalkii wasiiraddda arrimaha dibadda ee ka dhanka ahaa Nato
Xisbiga SD oo kala jabay